Short.io: အဖြူရောင်တံဆိပ် URL အတိုကောက် | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 7, 2020 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 6, 2020 Douglas Karr
ကျွန်တော့်ရဲ့ URL တွေကိုအတိုကောက်လုပ်ဖို့ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အချိန်အတော်ကြာကြာစာရင်းသွင်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်စနစ်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကတော်တော်လေးစျေးကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဒိုမိန်းခွဲကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏စျေးနှုန်းပုံစံတွင်များစွာကုန်ကျသည်။ တကယ်တော့ငါဟာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတစ်ခုလုံးအတွက်စွဲချက်တင်ခံရတာထက်သူတို့ရဲ့ URL အတိုကောက်အကောင့်အတွက်ပိုပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
ကျွန်ုပ်ဒိုမိန်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်မထားသည့်အခမဲ့ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်လူများဖြန့်ဝေနေသော URL ကိုယုံကြည်ရန်နှင့်အသိအမှတ်ပြုရန် II ကိုလိုလားသည်။ go.martech.zone။ ယေဘူယျ URL အချို့ကိုထုတ်ခြင်းသည်လုံခြုံရေးသတိရှိသူများအတွက်အလံနီဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းကိရိယာများစွာရှာဖွေရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပြီး၊ အချစ်ရယ် ချက်ချင်းထွက်မတ်တပ်ရပ်။ ငါသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင် subdomain နှင့်အတူတိုတောင်းတံဆိပ်ကပ်နိုင် - သူတို့ရဲ့အခမဲ့အကောင့်အောက်မှာတောင်! သင်၏အချက်အလက်များကိုတင်ပို့ခြင်းနှင့်တင်သွင်းခြင်းမပြုနိုင်ပါက၎င်းတို့သည်အမှန်တကယ်တိုတောင်းသောအဟောင်းမှရွေ့လျားရန်နည်းလမ်းများအမှန်တကယ်ရှိသည်။ အကုန်အကျလည်းမရှိပါ။
Short.io ဖြင့်သင်၎င်းကိုပက်ကျိအားအရှိန်မြှင့်ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်သင့်အတွက်နံပါတ်နှင့်အလိုအလျောက်တိုးမြှင့်ခြင်းကိုသာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြီးတော့သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပက်ကျိကိုအထဲ ဝင်၍ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အဓိကသော့ချက်တစ်ခုမှာ Google Analytics Campaign ဖြစ်သည်။ URL shortener ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏ UTM query string ကိုသင်ထည့်သွင်းထားသည့်ရှည်လျားသော URL ၏အရှည်ကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ Short.io ဖြင့်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောသန့်ရှင်းသော interface ဖြင့်သင်၏တိုတောင်းသော URL ရှိရွေးချယ်မှုအားလုံးဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Short.io လည်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည် WordPress ကို Plugin ကို သူတို့ရဲ့ API ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ link တွေကိုအလိုအလျှောက်အတိုကောက်ရန်။ တကယ်ကောင်းတဲ့အင်္ဂါရပ်!
Tags: bitlyစိတ်ကြိုက်ဒိုမိန်းanalytics googleGoogle Analytics စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးခြေရာခံ urlဂူဂဲလ် analytics url ကိုခြေရာခံရေတိုအချစ်ရယ်Shortenerurl အတိုကောက်UTMအဖြူရောင်တံဆိပ်